Mash West Inoti VaKasukuwere Ngavabaye
Mash West Inoti VaKasukuwere Ngavabaye	April 19, 2017 c263afri Matongerwo eNyika Leave a comment	CHINHOYI — Nhengo dzeZanu PF mudunhu reMashonaland West dzabuda nechisungo chekuti mukokeri wemisangano mubato iri, VaSaviour Kasukuwere, wamiswe basa ravo pamwe neremuhurumende, umo vari gurukota rezvematunhu.
Vachitaura pakupera kwemusangano wavo uyo waitirwa pamahofisi avo epurovhinzi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa, VaSimbarashe Ziyambi, vati nhengo dzose dzedunhu dzabvumirana kuti VaKasukuwere vambomiswa basa mubato pamwe nemuhurumende sezvo nyaya dzavari kupomherwa dzakawanda.
VaZiyambi vati VaKasukuwere vari kupomerwa mhosva dzinosanganisira kusaremekedza mukuru webato, VaRobert Mugabe, nemudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, kugovera hama neshamwari dzavo pekugara mumaguta akawanda, kudoma nhengo yeZanu PF kuNorton pasina kuwirirana nevamwe pamwe nekutadza kubatanidza nhengo dzebato sezvo vari ivo tete vemusangano.
Zvinonzi VaKasukuwere vakambunyikidza vanhu vekuNorton kuti vatambire VaRonald Chindedza semumiriri webato.
VaChindedza vakakundwa naVaTemba Mliswa musarudzo izvo zvakakonzera mitauro mudunhu rose.
Vachitaura pamusangano mumwechete nhengo yeCentral Committee, uye vari mutungamiri weZifa, VaPhilip Chiyangwa, vati Provincial Coordinating Committee yatambira chisungo chekudzingwa kwaVaKasukuwere.
VaChiyangwa vati VaKasukuwere vanga vachitadza basa ravo zvakanyanya zvekuti vakaregwa varipo iko kuine sarudzo gore rinouya, Zanu PF ingangokundwa.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vachishanda neZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti VaKasukuwere vachangobviswa pachigaro chemukokeri wemisangano chete.
Asi VaRuhanya vanoti nyaya yaVaKasukuwere harisi iro dambudziko munyika. VaRuhanya vanoti dambudzaiko riri munyika hutungamiri hwakaipa hwaVaMugabe.
Musangano wanhasi wapindwa nemasachigaro ematunhu madiki, nhengo dzose dzedunhu, pamwe nevamiriri veparamende mudunhu vanosanganisira vaimbove mukokeri wemisangano, VaWebster Shamu, VaDexter Nduna, VaKindness Paradza, VaZiyambi Ziyambi, VaFunny Phiri pamwe naVaGodfrey Beremauro.
Kusvika pari zvino matunhu anodarika matanhatu akabuda nechisungo chekuti VaKasukuwere vasiye basa.
Kudzingwa kwaVaKasukuwere kunofanirwa kusvitwa kuCentral Committee, iyo inofanirwa kutambira danho iri, yosvitsawo nyaya iyi kukomiti yeZanu PF yepamusoro soro, ye politiburo.
Kana politiburo yatambira danho iri, zvinoreva kuti VaKasukuwere vanenge vadzingwa mubato izvo zvinozopa VaMugabe mukana wekuvabvisa pachigaro chavo muhurumende.
Man stabs baby to deathCheating nurses exposed